अझै तीन प्रतिशत महिला गर्भमा छोरी भएकै कारण गर्भपतन गर्न चाहान्छन्
२o७५ असार ८ शुक्रबार / Friday, June 22, 2018
काठमाडौँ । नेपालमा ७१ प्रतिशत गर्भपतन परिवार नियोजनका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ ले गएको पाँच वर्षभित्र गर्भपतन गराउनेमध्ये आधाभन्दा बढीले थप बच्चाको चाहना नभएकाले गर्भपतन गराएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
गत पाँच वर्षको अवधिमा गर्भवती भएका ८१ प्रतिशतले जीवित बच्चा जन्माए पनि नौ प्रतिशतले गर्भपतन गराएका थिए । गर्भ खेर गएको भन्ने नौ प्रतिशत थिए भने एक प्रतिशतले मरेको बच्चा जन्माएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
तथ्याङ्कबारे जानकारी दिँदै डा शरद शर्माले सबैभन्दा बढी गर्भपतन गराउनेमा ३५ देखि ४९ वर्ष उमेरका २७ प्रतिशत महिला छन् । सम्पन्न परिवारका १६ प्रतिशत महिला गर्भपतन गराउनेछन् ।
उनले पाँचौँ वा सोभन्दा बढी गर्भ धारण गरेकामध्ये २१ प्रतिशतले गर्भपतन गराउने गरेका, पहिलो पटक गर्भधारण गरेकामध्ये दुई प्रतिशतले गर्भपतन गराउने गरेको जानकारी दिए । महत्वपूर्ण कुरा त के भने अझै पनि तीन प्रतिशत महिला गर्भमा छोरी भए गर्भपतन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्छन् भन्ने तथ्याङ्कले बोलेको छ ।
केही समयपछि बच्चा जन्माउन भन्दै गर्भपतन गराउने १२ प्रतिशत र नौ प्रतिशत महिलाले ढिलो गरी बच्चा जन्माउन गर्भपतन गराएको सर्वेक्षणमा पाइएको छ । यसले के देखाउँछ भने अझै पनि नेपालमा परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरेर परिवार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापित भएको छैन ।
उक्त सर्वेक्षणले आधुनिक परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने ५३ प्रतिशत मात्र छन् । नेपालले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएपछि गर्भपतनलाई परिवार नियोजनकै रुपमा लिने र अत्यधिक गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढेको वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ अचला वैद्यले बताइन् ।
हरेक पाँच वर्षको अन्तरमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण गर्दै आएको छ । सन् २०१६ को तथ्याङ्क सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा न्यू एराले गरेको सर्वेक्षण २०१६ को जूनदेखि जनवरी २०१७ सम्म गरिएको थियो । सन् १९९६ बाट शुरु गरिएको सर्वेक्षण यो पाँचौँ पटक गरिएको हो ।
काठमाडौँ / पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बाध्यात्मकरुपमा महिलाले गर्भधारण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि संविधानमा गर्भपतनलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको बताए । महिला, कानून र विकास मञ्चले यहाँ आज आयोजना गरेको अन्तक्र्रियमा उनले
तेह्रथुममा दुई वर्षभित्र असुरक्षित गर्भपतन शून्य बनाउने लक्ष्य
तेह्रथुम / सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सेवा शुरु भएको छोटो अवधिमै जिल्लाका धेरै महिलाले गर्भपतन गराएका छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाटै निःशुल्क मान्यताप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले गर्भपतन सेवा दिन थालेपछि असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेकाहरु पनि स्वास्थ्य
आयरल्याण्डको जनमतसंग्रहमा गर्भपतन रोकको अन्त्य गर्ने पक्षमा मतदान
डब्लिन, आएरल्याण्ड । आयरल्याण्डमा गर्भपतनसम्बन्धी कानूनमाथि भएको जनमत संग्रहको शुरुवाती औपचारिक नतिजामा ६० प्रतिशत मतदाताले कानूनलाई उदार बनाइनुपर्ने पक्ष अर्थात् गर्भपतनलाई मान्यता दिइनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेको देखिएको छ । बहुमत जनताले गर्भपतनमाथि
गर्भपतन सेवा लिन आउनेको संख्या वर्षेनी बढ्दै
ललितपुर । लुभुस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गर्भपतन सेवा लिन आउनेको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा जम्मा ५४ जना महिलाले गर्भपतन गराएको केन्द्रले जनाएको छ । अहिले संख्या
प्रतिनिधिसभामा मूल्यवृद्धि र कालोबजारी रोक्न ध्यानाकर्षण
रुकुमको बस दुर्घटनामा नौ घाइते, सातको अवस्था गम्भीर
ठूला क्षमताका सौर्य प्रणालीलाई ग्रिडमा जडान गर्न जनशक्ति तयार गर्नुपर्नेमा जोड
राजविराज विमानस्थलमा असार १० गतेबाट नियमित उडान भर्नेे
नाइजेरियालाई पन्छाउदै दोस्रो चरणमा जाने दाउमा आइसल्याण्ड
सुन तस्करी प्रकरणमा होटल व्यवसायी पक्राउ
नेपाल-चीन संयुक्त वक्तव्यमा के छ ?
भक्तपुरमा टिपरको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु
बौद्ध स्तुपअघिको सडक धान रोप्न मिल्ने जस्तो, कहिले बन्छ सरकार ? (फोटो फिचर)